Ulipristal Acetate အမှုန့် (26784-99-4) hplc≥98% ကိုဝယ်ပါ။ | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / Prohormone / Ulipristal Acetate အမှုန့် (26784-99-4)
rating: SKU: 26784-99-4. အမျိုးအစား: Prohormone
AASraw သည် CGMP စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ခြေရာခံနိုင်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အောက်ရှိဂရမ်မှ Ulipristal Acetate Powder (26784-99-4) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အစီအစဉ်အထိပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းစွမ်းရည်ရှိသည်။
Ulipristal Acetate အမှုန့် (26784-99-4) ဗီဒီယို
Ulipristal Acetate အမှုန့် (26784-99-4) Specification:
ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ: ထုတ်ကုန်အမည်: Ulipristal Acetate (Ulipristal Acetate အလယ်အလတ်)
CAS အမှတ်: 26784-99-4/126690-41-3/54201-84-2
နာမ်: 3,20-bis-Ethylenedioxy-5α,17α-dihydroxy-11β-(4-N,N-dimethylaminopheynl)-19-norpregn-9-ene; 3,20-bis-Ethylenedioxy-19-norpregna-5(10)9(11)dien-17-ol
Ulipristal Acetate အမှုန့် (26784-99-4): Description:
Ulipristal acetate ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဆေးကုသမှုခံယူရန်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆေးဝါးစာရင်းတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်လိုအပ်သည့်အထိရောက်ဆုံးနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောဆေးဝါးများဖြစ်သည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် NHS ကို ၁၇ ပေါင်နှုန်းဖြင့်ကုန်ကျသည်။ လက်လှမ်းမီမှုတိုးတက်စေရန်အတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်သူအားလုံးကိုလိုအပ်ပါကအသုံးပြုရန်ဆေးညွှန်းပေးသင့်သည်။
Ulipristal အက်စစ်အက်စစ်အမှုန့်သည်ပရိုဂျက်စတီရွန်၏လက်ခံမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသောအမျိုးမျိုးသောပရိုဂျက်စတုန်း receptor modulators၊ ၎င်းသည်နှင့်ပရိုဂျက်စတုန်းနှင့်ပရိုဂျက်စတုန်၏လက်ခံမှုကိုကာကွယ်ရန်ပရိုဂျက်တာ၏အသားဓာတ်ကိုပေါင်းစပ်ပေးသည်။ သူ၏ထိရောက်မှု၏အက်စစ်အက်စစ်သည်ရာသီလာချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သည့်အချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အလယ်ပိုင်း follicular hyperplasia အတွက်ပေးပို့ folliculogenesis တားစီးနှင့် estradiol ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။5~9ရက်အတွင်းနှောင့်နှေးကှဲထှကျ၏ follicles အတွက် luteinizing ဟော်မုန်းအထွတ်အထိပ်၏အုပ်ချုပ်ရေး။ Corpus ၏ luteum သည်အစောပိုင်းအုပ်ချုပ်မှု၏ endometrial ရင့်ကျက်မှု၏နှောင့်နှေးမှုမရှိသော်လည်း ၀.၆ ± ၂.၂ မီလီမီတာ (mean ± SD) ၏ endometrial အထူကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ဗြိတိသျှအမျိုးသားရေးဖော်ထုတ်သူ - BNF 69 (၆၉ ခု။ ) ။ ဗြိတိသျှဆေးပညာအသင်း။ 69. စစ။ 2015, 510. ISBN 560 ။
Trussell ဂျိမ်းစ်; ရေမွန်, အဲလစ်ဇဘက်, G ။ ; Cleland, ကယ်လီ (2014) ။ “ အရေးပေါ်သန္ဓေတားခြင်း - မရည်ရွယ်ဘဲကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အလမ်း” (PDF) ။ ဥပဒေနှင့်လူမှုတရားမျှတမှုအတွက်ခေတ်ပြိုင်ဖတ်။6(2): 7-38 ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင်မူရင်းမှ PDF (PDF) ကိုမော်ကွန်းတင်ခဲ့သည်။
HRA Pharma (မတ်လ ၂၀၁၃) ။ "ellaOne စတင်ခဲ့ရှိရာနိုင်ငံများ" ။ ပဲရစ်: HRA Pharma ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင်မူရင်းမှမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
Medroxyprogesterone acetate (၇၁-၅၈-၉)
Algestone acetophenide (DHPA) အမှုန့် (24356-94-3)